Waa maxay Suuq Gelinta-Guji-Guji? Istaatistikada Muhiimka ah ayaa lagu daray! | Martech Zone
Su'aal aan wali iweydiiyo milkiilayaasha ganacsiga qaangaarka ah ayaa ah inay tahay inay sameeyaan ama aysan yeelin suuq-bixinta-gujintooda (PPC) iyo in kale. Maaha su’aal fudud ama maya. PPC waxay bixisaa fursad layaableh oo ay ku riixdo xayeysiinta dhagaystayaasha hortooda raadinta, bulshada, iyo bogagga internetka oo aadan caadi ahaan ku gaari karin habab dabiici ah.
Waa maxay Suuq-geynta Bixi Hal Guji?
PPC waa hab lagu xayeysiiyo khadka tooska ah halkaasoo xayeysiiyaha uu lacag ku bixiyo mar kasta oo xayeysiintooda la riixo. Sababtoo ah waxay u baahan tahay isticmaale inuu dhab ahaantii tallaabo qaado, habkan xayeysiinta waa mid caan ah. Suuqyayaashu waxay ka heli karaan fursadaha PPC dhammaan mashiinnada raadinta, warbaahinta bulshada, iyo tiro badan oo ka mid ah shabakadaha xayeysiinta. Si ka duwan xayeysiisyada dhaqameed ee lagu soo oogo CPM (kharashkiiba kun aragti), PPC waxay ku eedeeysaa CPC (kharashka gujinta). CTR (heerka guji-dhex-dhexaad) waa boqolkiiba inta jeer ee isticmaaleyaashu riixaan kana horjeedaan eeg xayeysiiska PPC.
Ma inaad sameysaa PPC? Hagaag, waxaan kugula talin lahaa inaad yeelato aasaas maktabadda iyo website dhammaan dawannada iyo foorida kahor intaadan bilaabin inaad ku qarash gareeyso tan lacag ah xayeysiinta. Marka laga reebo, dabcan, waa haddii aadan hubin waxa ku jira waxa dhabta ah ee soo saari doona beddelaad. Tijaabinta iskudhafka ereyada muhiimka ah iyo nuqulka xayeysiinta ee PPC waxay kuu badbaadin kartaa tan lacag iyo waqti aad ku bixisid suuq geynta waxyaabaha aadan hubin.
Waxaan guud ahaan kula taliyaa macaamiisha inay helaan goob aasaasi ah, maktabad ka kooban mawduucyo, bogag aad u wanaagsan oo degitaanno ah, iyo barnaamij emayl… ka dib u isticmaal PPC si aad u kordhiso istiraatiijiyaddaada guud ee suuq-geynta dijitaalka ah. Waqti ka dib, waad dhisi kartaa raadadkaaga dabiiciga ah waxaadna u isticmaali kartaa PPC si tartiib ah markaad u baahan tahay hoggaanka.
Infograafigani ka yimid SERPwatch.io, Xaaladda Lacag-Bixinta-Guji 2019, waxay bixisaa tan macluumaad ah oo ku saabsan warshadaha PPC, sida qeybaha wax u qabtaan, ayna ku jiraan buur xaqiiqooyin la xiriira.
Tirakoobka PPC ee muhiimka ah ee 2019
Sanadkii la soo dhaafay, Kharashka xayeysiinta raadinta Google ayaa kordhay 23%, Kharashaadka xayeysiinta wax iibsiga ayaa kordhay 32%, iyo kharashka xayeysiiska qoraalka ayaa koray 15%.
Qiyaastii 45% ganacsiyada yaryar waxay si firfircoon maalgashi ugu sameynayaan PPC si ay u kobciyaan howlahooda.
Sida laga soo xigtay cilmi baarista Google, xayeysiisyada raadinta ayaa sameyn kara kor u qaadista wacyiga calaamadaha by 80%.
Xayeysiisyada la kafaala qaaday ayaa qaadanaya ilaa 2 ka mid ah 3 qasabno bogga koowaad ee Google.
Ololayaasha bandhigga Google waxay gaarayaan in ka badan 90% dadka isticmaala internetka caalamka.
Si la yaab leh, 65% dhammaan macaamiisha dhagsii xiriiriyaha illaa shey gaar ah.
Natiijooyinka raadinta lacag bixinta ee celcelis ahaan 1.5 jeer heerarka beddelka natiijooyinka raadinta dabiiciga ah.
In 2017, qalab mobile waxay soo saartay 55% oo ka mid ah qasabadaha raadinta Google.
70% dadka raadinaya mobilada ayaa soo waca ganacsi toos uga socda Google Search.
The celceliska heerka-guji-marayo shabakadaha raadinta waa 3.17%. Celceliska CTR ee loogu talagalay natiijada ugu sareysa ee la bixiyo waa 8%!
Hubso inaad ka fiiriso faahfaahinta guud ee hoose wixii ka badan 80 tirakoobyo kale!
Tags: qiimaha riixactrsidee loo kala xayeysiiyaa ppcraadinta lacagta lehbixisay xayeysiinta bulshadaBixi halkii gujippcsuuqgeynta ppcsaacadda serpwatch